Yusuf Garaad: Somalia & Kenya oo Berrito isku wajahaya Hague
Maxkamaddu waxay go’aansatay in labada dhinac ay isugu yeerto. In Kenya laga dhegeysto waxa ay ku saleyneyso diidmadeeda ay Maxkamadda uga dalbeyso in aanay dacwadda furin. Jawaab celin ayaa laga dhegeysan doonaa Dowladda Soomaaliya. Waxaa keliya oo dacwadda hadda la dhegeysanayaa ay ku saabsan tahay in ay tahay Maxkamaddu in ay gasho dacwadda oo ah doodda Soomaaliya iyo in ay go'aamiso in aanay dacwaddan geli doonin oo ah sida ay Kenya dooneyso.
Soomaaliya waxaa ka go'an in ay u dooddo xuquuqdeeda iyada oo aan cidna ku xad gudbin.
Haddii aad dooneyso macluumaad intan ka badan, fadlan halkan dhag sii oo akhri maqaal Cinwaankiisu yahay "Soomaaliya Vs Kenya" oo aan qoray July 2015 halkan ka akhriso
Posted by Yusuf Garaad at 01:48:00